शीत युद्ध लामो गएको छ, तर संस्कृति यसको प्रभाव अझै पनि waned छैन। हालैका वर्षहरूमा अमेरिकामा अवधि को लोकप्रिय जासूस उपन्यास थुप्रै स्क्रिन अनुकूलता। तिनीहरूलाई केही प्लट ( "जासूसी, बाहिर प्राप्त!") सानातिना परिवर्तन भइरहेको होने, चलचित्रहरू लागि पटकथा मा गर्दछ। अरूलाई समकालीन वास्तविकता गर्न छाँटकाँट। उत्तरार्द्ध फिल्म "Dzhek Rayan।: अस्तव्यस्त सिद्धान्त" समावेश यसलाई प्ले गर्ने अद्भुत अभिनेता, साथै राम्रो बक्स कार्यालय को नक्षत्र तापनि यो परियोजना ज्याक रयान को रोमांचक बारेमा फिलिमहरु को सम्पूर्ण श्रृंखला मा weakest थियो।
मुख्य पात्र बारेमा बिट
Dzhek Rayan (तल तस्विरमा) - प्रसिद्ध अमेरिकी novelist टम Clancy द्वारा आविष्कार एक वर्ण छ। लेखक थप खिच्नुभयो छन् धेरै जो एक दर्जन काम, भन्दा उसलाई समर्पित छ। पैट्रियट खेल "र" स्पष्ट र प्रस्तुत खतरा "(हैरिसन फोर्ड)," सबै डर योगफल "" 'लाल अक्टोबर' '(Alek Bolduin), को लागि हंट ": यो नायक बारेमा क्षणमा उहाँले विभिन्न भूमिकाको प्ले जसमा5फिलिमहरु गोली (बेन Affleck) र "Dzhek Rayan: अराजकता सिद्धान्त" (िईद्भस Payn)।
वर्ण को जीवनी लागि, यो जन पैट्रिक रयान, ज्याक भनिन्छ जो, बाल्टीमोर मा 1950 मा जन्म भएको थियो भनेर जानिन्छ
उहाँले बोस्टन कलेज मा आफ्नो शिक्षा पाए। ज्याक एक समुद्री बन्न योजना, तर प्रशिक्षण उडान एक समयमा घाइते र लगानीको दलाल मा retrained थियो। पछि, उहाँले लामो एक सल्लाहकार भएको छ जहाँ सीआईए, द्वारा recruited थियो। रयान सोभियत र पछि रूसी संघ majored। विभिन्न देशका संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध धेरै जमीन जायदाद को मद्दतले रोकियो गरिएको छ।
समय, ज्याक संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति भए र कार्यालय दुई सर्तहरू लागि बसे।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि रूपमा, त्यसपछि, चिकित्सा स्कूल कैरोलीन "कैथी" Mueller एक विद्यार्थी-प्रशिक्षार्थी आफ्नो युवावस्थामा थाह बन्न होने, ज्याक उनको साथ सम्बन्ध सुरु, र अन्ततः विवाह गरे। यो विवाहमा चार छोराछोरीलाई जन्म थिए।
को फिल्मस्ट्रिप जानकारी
2014 मा, सीआईए देखि विश्लेषकहरूले साहसी बारेमा पाँचौ फिलिम बाहिर स्क्रीन। मूल मा, त्यो अलि फरक नाम लगाएका: "Dzhek Rayan:। Mercenary छाया" वर्ण बारेमा अघिल्लो फिलिमहरु को सफलता पछि (बक्समा कार्यालय तीन पटक थप यसलाई निवेश भन्दा मा कमाएको), उत्पादकहरु को अर्को टेप बनाउन चाहन्थे। तर, कोष, साथै खोज मात्र 2008 मा एक निर्देशक लागि समस्याले, काम शूटिंग को तयारी मा सुरु भयो।
फिलिमहरु को अघिल्लो चक्र उपन्यास Toma Klensi आधारित भएको छ भने, जो रयान को जीवनी को तत्व प्रयोग आदम Cozad र दाऊदले Koepp मूल लिपि लेखिएको थियो, द्वारा नयाँ परियोजना हो। किन, निर्देशक केनेथ Branagh र राम्रो संग्रह को उत्कृष्ट काम भए तापनि फिल्म सम्पूर्ण श्रृंखला बीच weakest रूपमा मान्यता छ सायद यो छ।
"Dzhek Rayan: अस्तव्यस्त सिद्धान्त": कथा
नायक को जीवनी बारेमा चलचित्र छोटकरीमा को सुरुमा उनले सीआईए द्वारा recruited थियो पहिले। पछि, कार्य Dzhek Rayan न्यूयोर्क मा लगानी कम्पनीहरु मध्ये एक मा काम गर्दछ, र समानान्तर मा सीआईए सल्लाह गर्दा, 2014 उत्प्रेरित गर्छ।
रूसी oligarch विक्टर Cherevin को खाता अन्वेषण, आफ्नो कम्पनी संग काम, रयान शंकास्पद गतिविधि याद। पछि, उहाँले अमेरिकी अर्थव्यवस्था अबरोध गर्न डिजाइन ठूलो मात्रा सञ्चालनका तयारीको मा आशङ्का रूसी गोप्य सेवाहरू कि सीआईए रिपोर्ट।
आफ्नो शक पुष्टि गर्न, Dzhek Rayan वित्तीय खाता अडिट गर्न र Cherevin प्रमाण प्राप्त साझेदार कम्पनी को एक कर्मचारी को अधिकार गर्न मास्को पठाइएको छ।
मास्को मा, नायक मार्न, र त्यसपछि निरीक्षण गर्न हस्तक्षेप प्रयास। त्यसपछि तिनले सीआईए थोमस हार्पर र दुलही Katie आफ्नो पर्यवेक्षक को मद्दत संग, विचलन Cherevin कम्प्युटरबाट आउँदै डाटा चुरा।
तर, घर फर्केपछि पछि, ज्याक एक oligarch छोरा एक आतंकवादी कार्यमा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पतन ट्रिगर हुनेछ जो प्रतिबद्ध इरादा कि suspects। आफ्नो जीवन नलिइ, नायक जसबाट सम्पूर्ण सञ्चालन disrupting, को आतंककारी रोक्न अन्तिम मिनेट मा गर्न प्रबन्धन।
चलचित्र को आलोचना
बक्समा कार्यालयमा फिलिम को रील मा खर्च मुद्रा दुगुना छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद आलोचकहरु उनको एकदम चिसो थियो।
सबै उजुरीको पहिलो पुस्तक Toma Klensi संग कुनै पनि तुलना गर्न जाने गरे जो लिपि नै, कारण। ज्याक रयान को मूल काम मात्र रोमाञ्चकारी कथा भिन्नता, तर पनि ध्यान प्राविधिक विवरण बाहिर spelled, यो असम्भव चित्रकला को लिपि बारे भन्न छ "Dzhek Rayan:। अस्तव्यस्त सिद्धान्त" त्यसैले, वर्णहरू ताराहरु मार्फत कम्प्युटर प्रणाली casings मा प्राप्त, यो जो कोहीले पनि अलिकति पीसी उपकरण संग परिचित गर्न अर्थहीन देखिन्छ।
कुनै कम हास्यकार देखिन्छ भएको मास्को होटल मा रयान मार्न आउनुभएका रूसी hitman निग्रो,। अमेरिकी कालो भने - यस्तो उपस्थिति एउटा मानिस सजिलै देखिने हुन असम्भाव्य नभएसम्म यो रूसी संघ मा एक सामान्य घटना हो, तपाईं आफ्नो पेशा मा सफल हुन एक हिट मानिस आवश्यक छ।
पनि विशेष प्रभाव र कार्य दृष्य को आँखा दोष परिहाल्छ। एक छडी को मद्दतले ज्याक रयान गोली-प्रमाण ग्लास बख्तरबंद कार oligarch खण्डन गर्दा वा ऊर्जा बचत प्रकाश बल्ब प्रयोग आफ्नो प्रिय casings यातना गर्न प्रयास स्थिति राम्रो मूर्ख देखिन्छ। एक धैर्य कम्प्युटर मास्को परिदृश्य, साथै सबै न्यूयोर्क मा एक विस्फोट धेरै सस्तो सिनेमाको प्रभाव दिन मा आएको।
यो फिलिम मा धेरै बेफाइदा भए तापनि त्यहाँ pluses छन्। यी अभिनेता को एक अद्भुत चयन समावेश गर्नुहोस्।
पनि पैट्रिक डोयले द्वारा फिल्म लागि विशेष लिखित राम्रो संगीत उल्लेख गर्नुपर्छ।
व्यावहारिक रूसी संघ मा लेखकहरूले जीवन चित्र गर्न प्रयास संग सम्बन्धित धेरै absurdities बावजुद आनंद से तिनीहरूले Lermontov को कविता छलफल जसमा कैथी र Cherevenym बीच संवाद हाइलाइट।
Dzhek Rayan - फिल्म क्रिस Payne द्वारा "अस्तव्यस्त सिद्धान्त" को नायक (पाइन)
यो कलाकार इतिहासमा ज्याक रयान को भूमिका को चौथो कलाकार भए। यो विकल्प राम्रो थियो कि टिप्पण लायक छ। अभिनेता को ordinance अनुसार छैन कदम चाल्न बाध्य स्काउट असल क्रमबद्ध, फोटो सक्षम थियो। निस्सन्देह, उहाँले चित्रहरु दुई श्रृंखला मा खेलेका हैरिसन फोर्ड, concedes, तर यो Bena Affleka उच्च छ। Alec बाल्डविन - सायद, क्रिस किनभने पहिलो कलाकार गर्न समानता को यो भूमिका मिल्यो।
"" बस मेरो किस्मत, "Rendezvous: यो परियोजना अघि Payne प्रसिद्ध विभिन्न टेलिभिजन श्रृंखला मा सहभागिता (" ER, "" डिफेन्डर, "" छ पाइतालामुनि ") र रोमान्टिक हास्य (" शाही संलग्नता, राजकुमारी डायरीहरू2"मार्फत भयो अन्धो ")। पछि, नायक-प्रेमी संग िईद्भस Peyn एक नायक मा retrained ( "unstoppable", "यो युद्ध अर्थ")।
हालै, अभिनेता सबै भन्दा राम्रो चलचित्र श्रृंखला मा सहभागिता ल्याउन लागि जानिन्छ "स्टार ट्रेक।"
Keti Myuller को भूमिका मा Kira Naytli
दर्शक को ध्यान आकर्षित भएको थियो जो परियोजना, अर्को तारा, को Briton Keira (Keira) Knightley थियो। Paine जस्तै, यो किनभने अघिल्लो तस्बिरमा Katie खेलेका Bridget Moynahan र एनी आर्चर, संग समानता को भूमिका मा लगे। केही साँच्चै नयाँ अभिनेत्री उनको एकदम organically प्ले आफ्नो हेरोइन को छवि ल्याइएको छैन।
पूर्व परियोजना मा सहभागिता गर्न Knightley पोशाक नाटक मा भूमिकाको चित्रहरु श्रृंखला "क्यारेबियन को डाकू", साथै ( "शान र पूर्वाग्रह", "द रानी," "प्रायश्चितको," "अन्ना Karenina") गर्न प्रसिद्ध धन्यवाद भएको छ।
Knightley र Payne बाहेक, फिल्म र अन्य प्रसिद्ध अभिनेता मा अभिनय गर्ने कलाकार। तारा लडाकूको 80-90 - तिनीहरूलाई एक केविन Costner थियो। थोमस हार्पर - उहाँले रयान mentor प्ले। महोदय केनेथ Branagh - यो पनि निर्देशक को तस्वीर टिप्पण लायक छ। आफ्नो दोष छैन - पूरै फिलिम बनाउने प्रक्रियाको नेता रूपमा उहाँले राम्रो रील र परियोजनाको पापको बहुमत हटाउन सम्भव सबै गर्न खोजे। विक्टर Cherevin - खैर, आफैले निर्देशक मुख्य खलनायक को फिलिम भूमिका प्ले छ।
कथा अनुसार, दृश्य धेरै मास्को मा ठाउँ लिन हुनत, मात्र दुई परियोजनामा रूसी अभिनेता। यस युवा अभिनेत्री Elena Velikanova पौराणिक ब्यालेट नर्तक मिखाइल Baryshnikov।
फिल्म "Dzhek Rayan: अस्तव्यस्त सिद्धान्त", राम्रो अभिनय खेल बावजुद, एकदम कमजोर छ। तथापि, भविष्यमा राम्रो बक्स कार्यालय धन्यवाद, यो यसको लडी फिर्ता लिया हुन सक्छ।
जीवनी। बोरिस Korchevnikov अभिनेता र पत्रकार
"द Avengers: Ultron को आयु" - अभिनेता र भूमिकाको। कल्पना रोमाञ्चक
छोराछोरीको सूर्य मा तात्दै लक्षण। उपचार, रोकथाम
फूल Vanka भिजेको - आफ्नो बगैचा मा!
Marsupial स्तनधारी: को प्रतिनिधिहरु र आफ्नो विशेषताहरु
तापमान विशेषताहरु आधारमा रंग परिवर्तन गर्ने Thermochromic मसी, प्रयोग